Ny fahantrana aorian'ny fadimbolana
Reny Mila ankizy aho
Matetika, ireo vehivavy mampiasa ny fomba fiasa ara-batana amin'ny fanabeazana aizana, toy ny tena lehibe, dia liana amin'ny fanontaniana raha azo atao raha vantany vao vita ny volana vohoka. Andeha hodinihintsika amin'ny an-tsipiriany izany toe-javatra izany, ary manome valiny mahafa-po.
Mety ho vaky volo ve ny fitondrana vohoka?
Voalohany, tsy maintsy lazaina fa ny fampangatsiahana dia tsy azo atao afa-tsy eo antenatenan'ny vanim-potoanan'ny ratra, ao amin'ny dingan'ny ovulatory. Na izany aza, ny dokotera amin'ny fampiharana azy dia manamafy sy mametaka ny zava-misy rehefa bevohoka ny vehivavy mandritra ny vanim-potoana voalohany amin'ny vanim-potoana manaraka.
Ny mety hahatonga ny fitondrana vohoka hanomboka tsy tapaka aorian'ny fadimbolana, dia misy. Ny antony manazava io toe-javatra io dia:
Ny fisian'ny rindran - dolom-pitaterana maharitra. Araka ny fantatrao, ny fisakanana ara-dalàna ny sela ara-nofo dia manomboka amin'ny tsingerim-bolana vaovao. Mitaky 3-5 andro io dingana io. Raha misy vehivavy manana tsiranoka mandaitra maharitra (mandritra ny 8-10 andro), mandritra io vanim-potoana io dia mety ho matanjaka ny ovat vaovao, izay ovulates.
Ny faharetan'ny zatovo lahy. Amin'ny ankapobeny dia ekena fa amin'ny antsalany, spermatozoa dia mitazona ny asany sy ny fampiharana azy mandritra ny 3-5 andro. Na izany aza, misy ny trangan'ny sela miaina ao anatin'ny taovam-pananahan'ny vehivavy ary 7 andro taorian'ny fotoana nanaovana firaisana ara-nofo.
Cycle failure. Ny fanodinkodinam-panitsiana tsy ara-dalàna, izay mety ho "milomano" ny datin'ny fandroana, dia matetika mitarika ho amin'ny fahazoan-dàlana ateraky ny atody alohan'ny hametrahana azy.
Superovulation. Ao anatin'io fe-potoana io eo amin'ny gynkolojia, mahazatra ny mahafantatra ny trangan-javatra izay mahatonga ny tsiranoka ho an'ny fadimbolana tokana ary mamela ao anatin'ilay lavaka an-davan'andro, aorian'ny fotoana fohy, oocytes maromaro. Amin'io tranga io, ny iray amin'izy ireo dia afaka miara-manatona miaraka amin'ny endometrioma mihintsana, ary ny sisa tavela ary avy eo nohosorana.
Inona avy ireo mariky ny fitondrana vohoka aorian'ny fadimbolana?
Araka ny hita avy amin'ireo voalaza etsy ambony, dia maro ireo antony mahatonga ny olona hitovitovy amin'ny fotoana tsy ampoizina. Eny, ary ny dokotera momba ny olana momba ny vehivavy, momba ny fiasan'ny vohoka rehefa avy ny vanim-potoanan'ny reny, dia mamaly amin'ny fanamafisana.
Ao anatin'izany toe-javatra izany, ny vehivavy dia tokony hieritreritra ireo trangan-javatra ireo, ny soritr'aretina, ny fisian'izany dia mety manondro ny fiandohan'ny fitondrana. Noho izany, anisan'ireo famantarana ny fitondrana vohoka izay nitranga taorinan'ny fadimbolana vao haingana, ilaina ny miantso:
Famokarana sy fampivelarana eo amin'ny habetsahan'ny loharano mamaitra. Ity zava-misy ity dia mifandraika amin'ny fiandohan'ny famerenana ny famerenana ny hormonal background in the body of a woman. Mandritra izany fotoana izany, milaza ny solontenan'ny firaisana ara-drariny sasany fa mihamitombo ny nono ka mihamafy ny taolana.
Hanova ny tsiro tsiro. Vehivavy marobe no manoratra tsy an-kiato fa manomboka miova tsikelikely ny sakafo mahazatra azy: mila zavatra mamy ianao, avy eo manitra, avy eo indray mandeha.
Fahazavana, misintona fanaintainana ao ambany kibo. Ny fambara toy izany dia mety ho heverin'ny tovovavy ho fihenan'ny fotoana fadimbolana. Raha ny marina, ny fisintonana, ny fanaintainana malemy amin'ny ampahatelon'ny ampiana dia mety ho vokatry ny famokarana.
Ireo famantarana ireo dia tsy azo raisina ho azo antoka. Noho izany dia tsy maintsy miandry ny vehivavy mandra-pahavitan'ny fanandramana fanandramana. Raha ny marina, io fianarana io dia manodidina ny 14 andro aorian'ny daty voatondro. Ho an'ireo vehivavy izay tsy afaka miandry, hampijalijaly amin'ny fomba fiteniny, misy ny aretina azo avy amin'ny firaisana, izay ahafahana mahita ny atody foetal ny andro faha-4 sy faha-5 aorian'ny fiterahana.
Fandaharam-potoana ara-pahasalamana - fiomanana amin'ny fiterahana ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy
Endometria mangatsiaka - fitsaboana
Ahoana no hananganana ny endometrium?
Inona ny rafitra sy ny asan'ny placenta?
Fiterahana ny folicle
Fiomanana amin'ny fanentanana ovulation
Estrogen sy progesterone
Fifandraisana amin'ny antokon'olona
Mount Kelimutu, Indonezia
Mpitandro filaminana - toetra amam-panahy sy fanoherana
Boky an-tsoratra eo amin'ny rindrina
Kitapo fanina kitapo
Fikirakira amin'ny doro ho an'ny mpangataka
Lalao ara-panatanjahan-tena mifanaraka amin'ny 2013
Vehivavy amboara amin'ny lohataona
Ny taom-baovao amin'ny akanjobe
Fitaovana ho an'ny saribakoly manokana
Ny kavina mihantona - 66 sary ny peratra amin'ny lamosina lamaody sy orina voalohany
Ny fanaintainana eo amin'ny tendrontany
Fiovana marokoroko marobe
Ahoana ny fomba hampivoarana ny karazan'olona?
Inona no havoaka any Hongria?
Macaroni ao amin'ny mikrô